Netflix ရုပ်ရှင် ၆ ခုနှင့်သင် Enola Holmes ကိုနှစ်သက်ပါသလား - Netflix ရုပ်ရှင်
Netflix ရုပ်ရှင် ၆ ခုနှင့်သင် Enola Holmes ကိုနှစ်သက်ပါသလား
6 Netflix Movies Shows Watch If You Like Enola Holmes
ENOLA Holmes ။ (L မှ R သို့) MILLIE BOBBY BROWN ကို ENOLA Holmes, SUSAN WOKOMA EDITH ဟူ၍ သမုတ်သည်။ ဒဏ္©ာရီ© 2020
Sabrina Part4၏ Chilling Adventures သည် ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာတွင် Netflix သို့မလာပါ သူစိမ်းများ - Mind Flayer သည် Eleven ကိုအဘယ်ကြောင့်လိုချင်သနည်း။
ဤ Netflix ရုပ်ရှင်နှင့် Enola Holmes ကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုကြည့်ပါ
Enola ကေတီ Nancy Springer စာအုပ်စီးရီးအပေါ်အခြေခံပြီး Millie Bobby Brown၊ Henry Cavill နှင့် Sam Clafin တို့ပါဝင်သည်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Sherlock နှင့် Mycroft တို့၏အစ်မဖြစ်သူငယ်ရွယ်သော Enola Holmes သည်သူမ၏ပျောက်ဆုံးနေသောမိခင်အားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စီစဉ်ထားသည်။ ရုပ်ရှင်သည် Netflix ကိုစက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်၊ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်ရိုက်ခဲ့သည်။ သင်ကြည့်လိုက်သည်နှင့်ယခုကြည့်နေသောအလားတူအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်အကြံပြုချက်များရှိသည်။
သေချာတာပေါ့၊ ဒီဟာကို Enola Holmes ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မင်းက Millie Bobbie Brown ကိုကြိုက်တာတစ်ခုကမင်းရဲ့အခွင့်အလမ်းကမင်းကိုသူမအတွက်လည်းနှစ်သက်မှာပါ။ သူစိမ်းများ အလားတူဇာတ်လမ်းပြောပြဒြပ်စင်ရှိပါတယ်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးတွင်ကလေးငယ်များသည်သူတို့၏စွမ်းအားများ (အသိဥာဏ်ပညာသို့မဟုတ်သိပ္ပံဝတ္ထုများ) ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးကျေးဇူးများဖြင့်စွန့်စားခန်းများ၊ မောင်နှမများနှင့်အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်များကိုသွားကြသည်။ ဘာများထပ်လိုချင်တာလဲ။
ဒီထက်ပို။ ခေတ်မီဖြစ်လိမ့်မယ်နေစဉ် Enola ကေတီ , ဥပစာတော်တော်လေးဆင်တူသည်။ မိဘများ The Sleepover ပျောက်ဆုံးသွားပါ (ဤကိစ္စတွင်ပြန်ပေးဆွဲခြင်း) နှင့်ကလေးတွေသူတို့ကိုရှာဖွေတာဝန်ကျတယ်။ အလားတူဖြစ်ရပ်အတွက်ဖြစ်ပျက် Enola ကေတီ ။ သူမ၏အမေပျောက်ဆုံးသွားပြီးသူမကိုရှာရမည်။ နည်းတူအများကြီးတင်းပါး - ကန်လည်းရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ Enola ဟာလျှို့ဝှက်စွာသွားရတော့မယ်၊ ဒီကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုရှာဖို့သူလျှိုကိရိယာကိုသုံးကြတယ် သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင် Enola ကေတီ မင်းလည်းဒီကိုချစ်သင့်တယ်
ဟင်နရီ Cavill ပိုပြီးချစ်စရာကောင်းဖြစ်ခြင်းကြည့်ရှုလိုပါသလား? အိုကေ၊ သူ့ရုပ်ရှင်နဲ့ / သို့မဟုတ်အင်တာဗျူးများကိုကြည့်ကောင်းကြည့်နိုင်မှာပါ စုန်းမ အကယ်စင်စစ်သင်သည်ဤရုပ်ရှင်များတွင်ရှားလော့ဟုမ်းစ်အဖြစ်သူ့ကိုခစျြလျှင်စောင့်ကြည့်အစဉ်အဆက်သည်သူ၏အကောင်းဆုံးအခန်းကဏ္ one များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
netflix အပေါ် Tom နှင့် Jerry ဖြစ်ပါတယ်
ထို့အပြင် Ciri မိန်းကလေးတစ် ဦး လည်းရှိသေးသည်။ သူမသည်သူ့ကိုကူညီရန်ရည်ရွယ်ထားသော (Rivia of Geralt) အားရှာဖွေရန်အတွက်စွန့်စားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရမည်။ ရုပ်ရှင်ကားရဲ့အစမှာသူ့ကိုတွေ့မြင်ရသူဖြစ်လာစေဖို့ကူညီပေးခဲ့တဲ့သူ့အမေ Enola ကိုရှာနေပါတယ်။ ဤရွေ့ကား storylines အတော်လေးဆင်တူသည်။
Enola Holmes ဆိုတဲ့စွမ်းရည်ပြည့်ဝတဲ့အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ကိုမင်းကြိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ The Baby-Sitters ကလပ် ။ ဒီပြပွဲဟာနာမည်ကြီးအမ်အမ်မာတင်စာအုပ်စီးရီးထဲကနေအဆင်ပြေချောမွေ့ပြီးနေ့စဉ်ဘ ၀ မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြtheနာတွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေစဉ်ကလေးထိန်းအလုပ်ကိုစတင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မိန်းကလေးအုပ်စုတစ်စုရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည် Enola Holmes ကဲ့သို့သောစာအုပ်စီးရီးတစ်ခုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရုံသာမကမိန်းကလေးများကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေသည်ကိုလည်းပြသသည်။ ဒါထက်ဘာကောင်းလဲ။
ဤသည်ဖြစ်ကောင်းစာရင်းအပေါ်အထင်ရှားဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်အခွင့်အလမ်း Enola ကေတီ နှင့်သူမ၏မိခင်ဘယ်မှာထွက်ရှာဖွေ၏နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေနှင့်သူမလမ်းတစ်လျှောက်တွင်သူမသူ့ကိုယ်သူတွေ့သမျှသောဒုက္ခ, သင်ဖြစ်ကောင်းစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ် ရှားလော့ အဖြစ်ကောင်းစွာ။ ပြပွဲတွင် Benedict Cumberbatch နှင့် Martin Freeman တို့ကို Sherlock Holmes နှင့် Dr. Watson တို့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကမျက်မှောက်ခေတ်လန်ဒန်တွင်လူသတ်မှုကိုဖြေရှင်းသည့်အနေဖြင့်၎င်းတို့နောက်မှလိုက်ကြသည်။ Benedict Cumberbatch သည် Sherlock ကိုမကစားစေလိုသော်လည်း Henry Cavill ကဲ့သို့ပင်သူသည်ကြယ်တာရာအလုပ်ကိုလုပ်ဆဲဖြစ်သည်။ ငါရာသီ 1. အကြံပြုပါသည်။ ဒါဟာကြင်နာပြီးနောက်ပြီးနောက်ရထားလမ်းချွတ်တတ်၏။
E နှင့်အတူ 6. အန်း
မသာ E နှင့်အတူအန်း Enola Holmes နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဖြစ်ပျက်ပြီး၎င်းသည်စာအုပ်စီးရီးပေါ်တွင်လည်းအခြေခံသည်။ ပြပွဲတွင်လည်းစွန့်စားခန်းတစ်ခုကိုသွားပြီးသူမနေရာအသစ်တစ်ခုသို့သူမသွားရမည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုလည်းပြသသည်။ Enola Holmes သည်အင်္ဂလန်တွင်ကြီးပြင်းခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်သူမသည်သူမ၏အမေနှင့်အတူအိမ်တွင်အချိန်ကုန်လွန်ခဲ့ပြီးနောက်လန်ဒန်ကိုစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းသည်မင်းသားအက်ဒွပ်ကျွန်းတွင်အန်းသို့ရောက်သကဲ့သို့အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Enola Holmes နှင့်ဆင်တူသည်အခြားအဘယ်ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲများသင်ထင်သနည်း။ ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ!
နောက်တစ်ခု:အခုကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံး Netflix အချစ်ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင် ၅၀
ပရိသတ်များကဗစ်တိုးရီးယား Pedretti သည် Piper Perabo နှင့်တူသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်
Rick နှင့် Morty ရာသီ3သည် Hulu တွင်လွှတ်ပေးရန်စီစဉ်ထားသည်
Netflix ၏ TV Show ပြသမှု - စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ - စခန်း၏ပထမဆုံးနေ့
Netflix ရှိကလေးများအတွက်အကောင်းဆုံးဟယ်လိုဝင်း ၁၀ ခု
American Horror Story: Apocalypse ဇာတ်လမ်းတွဲ ၆ ကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုပြီးလှည့်စားကြည့်ရှုနိုင်သည်
Money Heist ရာသီ ၆ ရက်ဖြန့်ချိမည့်ရက်၊ သရုပ်ဆောင်၊ အနှစ်ချုပ်၊ နောက်တွဲယာဉ်နှင့်အခြားအရာများ
လူစီဖာရာသီ 5B လွှတ်ပေးသည့်နေ့နောက်ဆုံးသတင်းများ - ရာသီသစ်တစ်ခုရှိပါသလား။ ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ
Netflix ရှိ Fortune ၏ဘီးဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Netflix Life Podcast: The All The Boys 3၊ Bughead ကောလာဟလများနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်
The Baby-Sitters Club2ရာသီသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်လာမည်လား။
House of Cards ရာသီ4သည် Netflix တွင်စီးဆင်းနေပြီ
Dexter ၏သွန်း: သူတို့အဘယ်မှာရှိသနည်း
ဇာတ်လမ်းတွဲ 1 ပြန်လည်ရယူပါ
ဘယ်အချိန်မှာ x မုဆိုး manga ပြန်လာမုဆိုးပါလိမ့်မယ်
ဆိုးယုတ်သောအသေကောင်ရာသီ3Netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ vs ပြာ
တ ဦး တည်းလာကြတယ်ယောက်ျား၏ဖြစ်စဉ်များမည်မျှ
ဗဟိုရာသီ 12 ထွက်လာပါဘူး
Netflix မှအကောင်းဆုံးဟာသတီဗီ - ၄၀ Philadelphia တွင်ရာသီ ၁၁ တွင်နေသာသည်
House of Cards ရာသီ ၅: Conway က Frank Underwood ကိုနိုင်သလား။
အရှက်မရှိသောတရားဝင် 11 နှင့်နောက်ဆုံးရာသီအဘို့သက်တမ်းတိုး
၂၀၁၁ နို ၀ င်ဘာလအတွက် Hulu ရုပ်ရှင်အသစ်နှင့်ပြပွဲများ